Tababare Thomas Tuchel oo ka hadlay guuldarradii kooxdiisa PSG ka soo gaartay Man United – Gool FM
(Paris) 21 Okt 2020. Macalinka kooxda Paris Saint-Germain ee Thomas Tuchel ayaa muujiyay sida uu uga naxsan yahay qaab ciyaareedkii kooxdiisa ee kulankii Manchester United bilowgii wareega group-yada ee tartanka Champions League.
Wrgeyska “L’Equipe” ee dalka France ayaa shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay tababare Thomas Tuchel, kaddib ciyaarta, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Hadaan si daacadnimo u hadlo, ma garanayo waxa dhacay, dhibaatooyin badan ayaa la kulanay qeybtii hore, tani waxay igu noqotay layaab, sababatoo ah waxaan gaarnay shan guul oo xiriir ah”.
Tuchel ayaa intaa ku daray, isagoo dhaleeceeyay waxqabadka ciyaartoydiisa intii ay ciyaartu socotay, wuxuuna yiri:
“Wax qabadka wuxuu ahaa dagaal la’aan, cadaadis la’aan, ma aqaano sababta”.
“Waa inaan horumar sameynaa, way iska cadahay inaanan ku qanacsaneyn waxqabadka, laakiin ma ahan waqtigii aan bulshada dhexdeeda ku dhaliili lahayn, gudaha ayaan ku sameyn doonaa”.
“Kahor ciyaarta, jawiga qolka labiska wuxuu ahaa mid aad u deggan, waxaan dareemay dareeno qariib ah, xaaladaha caadiga ah, waxaan dhageysanaa muusik badan oo cod dheer ah, laakiin xaalada sidaas ma aheyn maanta, inta u dhaxeysa labada qaybood ma ahayn waqtigii la xanaaqi lahaa”.